Nadiifiya qaboojiyaha si looga fogaado ur xun | Bezzia
Maria vazquez | 21/06/2022 12:00 | Guriga
Ma daaratay qaboojinta? Shaki nagagama jiro in kulaylkii ina soo maray usbuucii la soo dhaafay, in badan oo idinka mid ah ay bilaabi doonaan. Iyo laga yaabee, ka dib markii aad shaqo la'aan ahayd bilo badan, waxaad aragtay ur gaar ah oo aan fiicnayn. Ha werwerin, nadiifi qaboojiyaha dhibaataduna way iska bixi doontaa.
Nadiifinta qaboojiyaha ka hor inta aan dib loo bilaabin xilliga gu'ga waxay ka qayb qaadanaysaa kaliya maahan iska ilaali ur xun kaas oo soo saari kara wasakh qayb kasta oo ka mid ah qaybihiisa. Laakiin, marka lagu daro, waxay hagaajin doontaa waxtarkeeda tamarta. Soo hel dhammaan tabaha aad nala nadiifiso.
wasakh urursan filtarrada, beddelayaasha, marawaxadaha ama bullaacadaha waxay keeni karaan ur aan fiicnayn marka qalabka la shido. Nadiifintu waa furaha soo afjarida tan iyo ka dhigista hawada la eryay nadiif oo ka nadiif ah bakteeriyada. Dami aaladda, raac tillaabada xigta oo tallaabo tallaabo ah waxaadna u heli doontaa sida ugu wanaagsan oo cusub in ka yar 30 daqiiqo.
1 Talaabo talaabo u ah nadiifinta
1.1 nadiifi filtarrada
1.2 nadiifi qulqulka
1.3 Nadiifi bannaanka cutubka
2 Goorma ayaa la nadiifiyaa?
Talaabo talaabo u ah nadiifinta
Shaqada kuwan waa in ay sifeeyaan hawada iyo ka hortagga bakteeriyada iyo microorganisms kale si ay u bataan oo waxyeello u geystaan ​​shaqada qalabka. Shaandheeyaha wasakhaysan wuxuu yareeyaa waxtarka qalabka waana sababta koowaad ee hawada laga saaray ur xun.
Shaandheeyayaashu waxay ku yaalaan qaybta gudaha ee kala qaybsanaanta, gadaasha gadaasha. Nadiifinta waa inaad ka saartaa. Haddii ay tahay nadiifinta dayactirka, waxay ku filnaan doontaa inaad isticmaasho nadiifiyaha nadiifiyaha ah si aad uga saarto boodhka iyo qaar ka mid ah raadadka wasakhda. Si kastaba ha ahaatee, si fiican loo nadiifiyo guga, si kastaba ha ahaatee ku raaci biyo diirran oo hadh ku qalaji intaadan dib u dhigin.
Qaboojiyayaashu waxay eryaan biyaha sababta oo ah uumiga ku urura digsiga dheecaanka. Marka biyahani ay sii fadhiyaan - oo ay ugu wacan tahay jiirada xun ee tuubada - waxay keeni kartaa ur xun waxayna fududayn kartaa koritaanka bakteeriyada iyo fungi.
Si adag loogu afuufo tuubada waxay noqon kartaa xal fudud, si kastaba ha ahaatee ma aha wax lagu taliyay dhammaan qalabka. Intaa waxaa dheer, rakibaadaha dhexe sida caadiga ah way adag tahay in la galo. U rogista habka kulaylka dhowr daqiiqo waxay noqon kartaa xal kale.
Nadiifi bannaanka cutubka
Inkasta oo qaybaha ugu jilicsan lagu ilaaliyo gudaha unugga, sidoo kale waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la sameeyo daryeesho bannaanka qalabka si aanay boodhka iyo wasakhda u ururin. Waxaadna si fudud u samayn kartaa ilaa inta qalabku ku yaal meel la heli karo.
Nadiifiye vacuum ah iyo maro yar oo qoyan ayaa kaa caawin doonta in unugu nadiifiyo dibadda. Daboolida, baalasha hawada la qaadaayo iyo daakidhku waxay ahaan doonaan kuwo cusub oo aan loo baahnayn in la isticmaalo alaab gaar ah oo lagu nadiifiyo.
Goorma ayaa la nadiifiyaa?
Guud ahaan, waxaa lagu talinayaa in la nadiifiyo qaboojiyaha ka hor inta aan la bilaabin guga iyo ka dib isticmaalka dheer ee xagaaga. Sannadkii laba jeer si joogto ah Waxaad ka fogaan doontaa dhibaatooyin badan. Intaa waxaa dheer, ma dhibayso in aad nadiifiso qalabka dibadda qaar ka badan marka aan samayno qaar ka mid ah nadiifinta guud.
Waxay ku socotaa iyada oo aan la sheegin in nadiifinta hawada ku wareegaysa gurigeena, dhibaatooyinka yaraanta ayaa soo bixi doona. tubaakada, qiiqa qiiqa ama jikada ayaa xaalada ka sii dari karta oo u baahan nadiifin joogto ah oo qoto dheer.
Waxaan ku siinnay furayaasha si aad u nadiifisid qaboojiyaha gurigaaga laakiin had iyo jeer xasuuso inaad akhrido buug-gacmeedka wax-soo-saarka ka hor inta aanad bilaabin si aad uga fogaato dhibaatooyinka. Koox kastaa waxay leedahay waxyaalaheeda gaarka ah.
Ugu dambeyntii, haddii aad wax shaki ah ka qabtid, waxaan kugula talineynaa inaad wacdo xirfadle ama la xiriir adeegga dayactirka rakibidda. Kala qaybsanaantu waa mashiinno jilicsan oo u baahan shaqaale xirfad leh si ay u xalliyaan dhibaatooyinka qaarkood.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » Nadiifi qaboojiyaha si aad uga fogaato ur xun